Isticmaalayaashu waxay ka tagayaan lacagaha la wadaago: madax furasho dheeraad ah | Dhaqaalaha
Isticmaalayaashu waxay ka tagayaan lacagaha isdhaafsiga ah: madax furasho badan
Jose recio | | Lacagaha, Alaabada maaliyadeed
Lacagta la wadaago ma aha wax soo saar maaliyadeed oo maraya waqtiyada ugu fiican. Haddii kale, taa lidkeed, oo sida ku cad xogtii ugu dambaysay ee ay soo bandhigtay Ururka Hay'adaha Maalgashiga Wadajirka ah iyo Lacagta Hawlgabka (Inverco) waxay muujinayaan in lacag celin kuwaas oo amar siinaya cinwaanadooda waxay gaarayaan heerar aan hore loo arag sannadihii la soo dhaafay. Halka ka bixitaanka horusocodka ee hantidan maaliyadeed ay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu hooseeya ee suuqani gaarka u ah.
Lama iloobi karo in sanadkaan gudihiisa, oo hada dhamaanaaya, qayb wanaagsan oo kamid ah maalgalinta maalgalintan ay kujiraan xaalad lagu tilmaami karo mid aad u jilicsan. Iyada oo hoos u dhac weyn ku yimid qiimayntiisa iyo xaaladaha qaarkood boqolkiiba laba-god. Laakiin dhacdadan waxaa uga sii daray xaqiiqda ah inaysan kaliya saameyn ku yeelan lacagaha caddaaladda ku saleysan sida qofku u maleyn karo bilowga. Haddii kale, taa lidkeeda, kuwa dakhliga go'an ayaa sidoo kale ah dhibanayaal ama xitaa kuwa loogu yeero moodellada kale.
Xaqiiqadani waxay u horseeday maalgashadeyaal badan oo yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah inay aad uga walaacaan maalgashiyadooda mararka qaarna ma haysan wax ay doortaan oo aan ka ahayn xir jagooyinkaaga qaar ka mid ah hantidan maaliyadeed. Xaaladaha qaarkood inaad ku raaxeysato faa'iidooyinkaaga (iibsiga jira shan sano ama ka badan) iyo kuwa kale si aan saameyn dheeraad ah ugu yeelan khasaarahaaga. Xaqiiqdii waa dhacdadan ugu dambeysa ee ugu khatarta badan kuwa haysta maal-gashiga maal-gashiga mana helin xal ka fiican marka loo eego in la xiro jagooyinka si loogu qoondeeyo xisaabinta alaabooyinka kale ee maaliyadeed ee soo saara nabadgelyo aad u weyn xilligan.
1 Maalgelinta maalgashiga inta badan waa la ciqaaba
2 Danta daneeyayaasha oo aan jirin
3 Sidee looga fogaadaa khasaaro maaliyadeed?
4 Faallooyinka ku jira faylalka maalgashiga
5 Faa'iidooyinka cashuurta ee wareejinta
Maalgelinta maalgashiga inta badan waa la ciqaaba
Qaybta taban ee fasalkan alaabooyinka loogu talagalay maalgashiga waa kuwa ka yimid Saamiga Caalamiga ah ee Soo Baxaya iyo Lacagta Euro (marka laga reebo Spain) qaybaha diiwaangeliyey hoos u dhacii ugu weynaa bilihii ugu dambeeyay ee sanadka, iyadoo soo noqnoqoshada bil-bil ee bil ka badan 5%. Midda hore sidoo kale waa qaybta leh isbeddelka ugu weyn sanadka (-8%). Ilaa heer ah in tirada xisaabaadka kaqeybgalayaasha ee maalgelinta maalgashiga qaran ay hoos u dhacday bishii la soo dhaafay (ku dhowaad 140.000 marka loo eego bishii la soo dhaafay), tiradooduna waxay aad ugu dhowaatay toban milyan oo kaqeybgalayaal.
Dhinaca kale, intii lagu jiray bishii la soo dhaafay, suuqyada saamiyada Yurub waxay la kulmeen sixitaanno (tusaale ahaan, tusmada xulashada ee saamiyada Isbaanishka, Ibex 35, ayaa la xiray marka loo eego dhammaadkii bishii Luulyo ee -4,8% iyo EuroStoxx 50 ayaa sidaas ku sameeyay -3,8%), halka tusmooyinka ugu muhiimsan ee Mareykanka ay ku sii socdeen kor u kaca bilihii la soo dhaafay. In kasta oo labadii bilood ee la soo dhaafay sixitaan lagu soo rogay indices-yadan saamiyada. Marka laga soo tago tixgelinta kale ee farsamada iyo xitaa aragtida aasaasiga ah.
In kasta oo taa lidkeeda, oo dakhligeedu go'an yahay ilo tixraac ah, isbeddelkeeda suuqyada maaliyadeed sidoo kale uu aad uga niyad jabay maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe. Sababtoo ah runtii, IRR ee dammaanadda 10-sano ee Jarmalka ayaa hoos ugu dhacay bishii ilaa 0,34% marka loo eego 0,45% dhamaadkii sanadkii hore, halka dhanka kale waxsoosaarka 10 sano ee Isbaanishka uu xoogaa kor u kacay ilaa 1,42% halka uu ka ahaa 1,38%. Halkee, qiimaha halista ee Spain ayaa lagu xiray 114 qodob oo saldhig u ah 98 oo ay muujisay dhammaadkii July.
Danta daneeyayaasha oo aan jirin
Xogtaan oo dhami waxay saameyn muuqata ku yeesheen dareenka maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe ee fasalkan wax soo saarka maaliyadeed. Qaar badan oo ka mid ah shaqsiyaadka ayaa go'aansaday inay dib u soo celiyaan saamiyadooda ku saabsan heerarka aan la arkin sannadihii la soo dhaafay. Si loo xaqiijiyo xaaladdan aadka u gaarka ah ee ay maal-gashiga maal-gashiga naftooda ka helaan, waxaa lagama maarmaan ah in la muujiyo in tirada akoonnada ka-qaybgalayaasha ee maal-gashiga maal-gashiga ay suurtogal tahay in ay ku dhowdahay 11.000.000 unug.
Xogtan ficil ahaan waxay ka dhigan tahay inay iyagu wax yihiin in ka badan 200.000 oo xisaab ka yar kii abid ugu sareeyay ee la gaaro bishii Juun ee la soo dhaafay. Sida tixraac taariikhi ah, waa in la ogaadaa in sanadihii ugu qotada dheeraa ee dhibaatada dhaqaale, intii u dhaxeysay 2007 iyo 2009, wadarta sinnaanta ee hay'adaha maalgashiga wadajirka ahi ay hoos ugu dhacday 200.000 milyan oo euro. Halka bartamihii sanadkan tirada maalgashadayaashu ay ka laba jibaarmeen hoos u dhac, laakiin labadii bilood ee la soo dhaafay ay hoos u dhacday. Ilaa heer in qayb wanaagsan oo ka mid ah falanqeeyayaasha maaliyadeed ay qabaan fikradda ah in tani ay tahay qayb maalgashi oo muujinaysa calaamado daal.
Sidee looga fogaadaa khasaaro maaliyadeed?
Maaha wax aan caadi ahayn in laga fekero in maalgashadayaasha qaar ee fasalkan wax soo saarka maaliyadeed ay ku jiraan casaanka. Ama inaad si fiican u fahamto, in miisaankaaga dheelitirka uu yahay mid ka mid ah khasaarihii soo gaadhay maalgashiga illaa hadda. Iyada oo ay la soo deristay xaaladdan aan loo baahnayn, waxaa jira xeelado dhowr ah oo maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ay isticmaali karaan. Midka hore ayaa ah inuu si toos ah lacag ugu sameeyo iska ilaali khasaaro dheeraad ah. Ku wajahan sanad kale oo la filayo inay sii socoto inay ahaato mid aad u adag suuqyada maaliyadeed.
Nidaamyada kale ee firfircoonida ee hadda ka dib la soo waaridi karo waa midka ay soo saareen sii wad ilaa hadda. Si kale haddii loo dhigo, ku sugnaanshaha maal-gashiga maal-gashiga muddo-dhexaad ah iyo gaar ahaan muddo dheer. Layaab malahan, waa xaalada dabiiciga ah ee maalgalinta maal gashiga, sida ay kula taliyeen dhamaan falanqeeyayaasha dhaqaalaha. Sanduuqa wadajirka ahi ma noqon karo sida iibsashada iyo iibinta saamiyada suuqa saamiyada oo socon kara dhowr bilood. Alaabtan la falanqeeyay si loo helo soo-celinta la filayo, ugu yaraan saddex ama afar sano ayaa lagu bixin doonaa. Layaab malahan, waa mudadaada ugu faa iidada badan ilaa inta tabarucaadka lacageed lasoocayo.
Faallooyinka ku jira faylalka maalgashiga
Istaraatiijiyadda saddexaad ee maalgashiga ayaa ka kooban dib u eegid sanduuqa sanduuqa maalgashiga waqti kasta oo cayiman. Tusaale ahaan, sanad kasta iyo kani waa waqtigii aad si buuxda ugu dadaali laheyd howshan maadaama dhamaadka sanadka uu runtii aad u dhow yahay. Waxay ku saleysan tahay wax aad u fudud, laakiin isla markaasna ay adag tahay in la fuliyo, sida beddelidda maalgelin maalgashi oo aan faa'iido badan lahayn kuwa leh awood koboc weyn sannadaha soo socda. Xitaa ka wareejinta shaqooyinka laga helo dakhliga isbeddelka illaa dakhliga go'an ama taa beddelkeeda, iyadoo kuxiran xaaladda dhabta ah ee suuqyada maaliyadeed.
Dhinaca kale, waa inaad maanka ku haysaa in wareejinta lacagaha maal-gashiga ay yihiin hawlgal faa'iido badan u leh danahaaga gaarka ah. Sababaha kale maxaa yeelay kuguma khasaarayso hal euro sidoo kale ma jiri doonaan guddiyo nooc kasta ah oo lagu horumarinayo dhaqdhaqaaqan gaarka ah. Iyada oo shuruud kaliya ay tahay inaad ku dhex sameyso isla bangiga ama hay'adda maaliyadeed. Intaas waxaa sii dheer, waa hawl aad fulin karto inta jeer ee aad rabto, ma jiraan wax xaddidan, xitaa xaddidaadyo kuma saabsan tirada wareejinta ee aad sameyn doontid hadda kadib.
Faa'iidooyinka cashuurta ee wareejinta
Waa inaadan iloobin in wareejinta lacagaha maal-gashiga ay sidoo kale bixiyaan faa'iidooyin cashuur oo abuuri kara wax ka badan hal farxad mar uun. Sabab aad si fudud u fahmi doontid ayaa ah taas oo ah inaadan u baahnayn inaad ku dhawaaqdo macaashka warbixinta soo socota ee soo socota. Intaad kusii wadaysid inaad keydintaada ugu keydiso lacag wadaag sidaad had iyo jeerba laheyd. Xitaa waad sugi kartaa inta canshuuraha ay hoos u dhacayaan si aad lacag ugu keydiso qalliinkan. Dabcan isku mid maahan ku samee 18% marka loo eego 15%, inaan soo qaato hal tusaale oo keliya.
Beddelka ugu dambeeya ee lagu hagaajiyo bayaanka dakhliga ee hantidaada shaqsiyeed ama qoys, had iyo jeer waxaa jiri doonta ikhtiyaarka ah in laga tago maal-gashiga maal-gashiga si loogu dhaqaaqo wax soo saarka bangiyada kale ee nabdoon. Tusaale ahaan, deebaajiga muddada-go'an, qoraallada xayaysiiska shirkadaha ama xitaa xisaabaadka mushaharka badan qaata. Si kastaba ha noqotee, heerka dulsaarka ee moodelladan keydku ay ku siin doonaan wax badan ma noqon doonaan xilligan saxda ah. Iyada oo xadadka ganacsiga ee dirqi ka badan 1%. In kasta oo ugu yaraan aad heli doonto hubaal ah inaadan lacag kaa lumin doonin oo aad heli doonto dakhli go'an oo dammaanad leh sannad kasta.
Beddelkan maalgashiga, dabcan ma noqon doontid milyaneer, laakiin ugu yaraan waxay kaa caawin doontaa inaad si fiican ugu seexato xaaladaha adag ee is bedbeddelaya ee dhammaan suuqyada maaliyadeed. Sida hadda socota tiro wanaagsan oo maal-gashadeyaal yaryar iyo dhexdhexaad ah ah oo doortay ikhtiyaarkan. In la isku dayo in la badbaadiyo sanad xun, labadaba sinnaan iyo dakhli go'an, sidii sanadkii 2018 dhab ahaan loo soo maray, kaas oo ku dhammaan doona waqti aad u yar. Iyada oo xadadka ganacsiga ee dirqi ka badan 1%. In kasta oo ugu yaraan aad heli doonto hubaal ah inaadan lacag kaa lumin doonin oo aad heli doonto dakhli go'an oo dammaanad leh sannad walba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Alaabada maaliyadeed » Isticmaalayaashu waxay ka tagayaan lacagaha isdhaafsiga ah: madax furasho badan